Dowladda Soomaaliya oo Gacanta ku dhigtay gaari qarax loo soo waday Muqdisho - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo Gacanta ku dhigtay gaari qarax loo soo waday Muqdisho
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliyeed ee Danab ee Xoogga Dalka ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari Hoomey ah oo Al-Shabaab ay ku diyaariyeen walxaha qarxa.
Howlgalkaan lagu soo qabtay gaariga hoomeyga ah ee lagu diyaariyey walxaha qarxa ayaa waxaa laga fuliyey tuulada Cad Cadeey oo hoostagta Degmada Afgooye gobolka Shabellaha Hoose
Saraakiil ka tirsan Ciidanka DANAB oo la hadlay Idaacadda Codka Ciidamada ayaa sheegay in Gaariga Hoomeyga ah in muddo ah lagu diyaarinayay walxa qarx, isla markaana Al-Shabaab ay doonayeen in ay ku weeraraan Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalooyinka Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Ugu dambeyntii Saraakiisha Danab waxa ay sheegeen in Xogta gaariga qaraxyada lagu diyaariye ay soo gudbiyeen shacabka ku dhaqan Tuulada Cad Cadeey ee degmada Afgooye.
Howlgalkan ay Ciidamada dowladda Soomaliya ku qabteen Gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli shalay Bar-koontorool oo ku taal Isgoyska Sayidka ee Muqdisho uu ka dhacay qarax gaari oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Previous articleXiisad Caawa ka taagan degmada Guriceel
Next articleShirkii uu ku baaqay Farmaajo oo fashil ku dhow iyo shir kale o furmaya